“Waxa aan sugeynaa maraakiibtii iyo Injineeradii hagaajin…
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta XFS Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in aysan wali dhammaan cilad bixinta Internet-ka koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo gelinkii dambe shalay yimid, kadib markii uu maqnaa ku dhawaad 30-saac.
Canshuur ayaa sheegay in ciladda ay ku arkeen meel aan fogeyn, balse la dalbay injinerada hagaajinta fiilada internet-ka sameyn lahayd, haatan si KMG ahna loo isticmaalayo, si loosii daboolo baahida loo qabo.
RW Guuleed oo xariga ka jaray Xafiiska Hubinta Tayada…
Wasiir Canshuur ayaa sheegay in qadka Soomaaliya oo ku xirnaa Suudaan si KMG ah loogu weeciyay Mombasa oo ah Magaalo Xeebeed iyanna uu gaaro qadka Internet-ka Viber-ka ee taga kenya.
“Xalka Internet-ka waa mid KMG ah, waxaan ogaanay oo lasoo helay halka ciladda ka gaartay fiilada qadka keenta oo fiiqantay (Muruxday), waxa aan ku xirnay Mombasa oo Kenya ah, halka laga soo wareejiyay Suudaan, waxa aan sugeynaa Injineerada iyo maraakiibta cilad bixinta sameyneysa” ayuu yiri Wasiirka Isgaarsiinta Soomaaliya.
Muqdisho waxaa haatan laga isticmaalayaa internet-ka oo mararka culus, dadka ayaa walwal ka muujiyay hadalkaan ah in aan ilaa haatan la xalin ciladdii sababtay in muddo ku dhaw 30-saac maqnaado.
axadle 3836 posts